Depiote mpikambana GPR: laharam-pahamehana ny fambolena, ny fizahantany… | NewsMada
Depiote mpikambana GPR: laharam-pahamehana ny fambolena, ny fizahantany…
Namoaka fehin-kevitra, omaly, ireo solombavambahoaka ao amin’ny GPR (Groupe des Parlementaires Républicains), vondrona parlemantera repoblikana, manoloana ny valanaretina Covid-19. Nasian’izy ireo teny manokana ny fanarenana ny toekarena.
Nambaran’ireo depiote mivondrona ao amin’ny GPR ny paikady hanarenana ny toekarena, ravan’izao coronavirus izao. Laharam-pahamehana nosoritan’izy ireo ny sehatry ny fambolena, fizahantany ary ireo orinasa tsy miankina. Betsaka ny fahavoazana mahazo ireo sehatra ireo, izay ny maro anisa mivelona amin’izany ka hampitombo ny tahan’ny fahantrana, raha tsy misy paikady hentitra. Tokony hifandraika amin’izany ny lalàna momba ny tetibolam-panjakana hasiam-panitsiana.
“Mifandray amin’ireo fihariana rehetra ireo, ohatra, ny vidin-tsolika izay mitotongana any amin’ny tsena iraisam-pirenena, nefa tsy miova ny vidiny eto Madagasikara”, hoy ny filohan’ny GPR, Rakotomamonjy Neypatraiky, depioten’Ihosy. Hatramin’ny voalohan’ny taona, nidina hatrany ny vidin-tsolika, latsaky 30 dolara ny baril izao, nefa ny vidiny eto an-toerana mbola tany amin’ny 70 dolara ny baril. Miandry izany ireo solombavambahoaka ireo ny amin’izay fepetra mety horaisin’ny fanjakana, satria miankiana betsaka amin’io vidin-tsolika io ny zavatra maro.
Mitaky koa io vondrona parlemantera io ny hamoahan’ny fanjakana ny mangarahara amin’ny fitantanana ireo fanampiana azo avy any ivelany. “Tsy ny faritra ahitana tsimokaretina ihany no sahirana fa ny rehetra, koa rariny raha mahazo fanampiana koa ny faritra hafa” hoy Rakotomamonjy Neypatraiky. Misy 21 ireo mpikambana ao amin’ny GPR, misoratra ho mahaleotena, tsy mitonona ho mpanohana na mpanohitra. Saika avy amin’ny mpikambana antoko HVM izy ireo.